Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1212 lak
Ny marina sy ny lainga (2Tes.2:10-12)
Alakamisy 20 Sept.
Vakio ny 2 Tes. 2:10-12. Nahoana no avelan’Andriamanitra hiasan’ny fahadisoan-kevitra ny maro? Inona no nolavin’ny ratsy fanahy, araka ny voalazan’io andininy io?
Sarotra dia sarotra ho an’ny maro tokoa ny manaiky ny andininy 11. Mivantana dia mivantana ny ilazan’i Paoly azy, “Koa izany no ampanateran’Andriamanitra fiasan’ny fahadisoankevitra aminy hinoany ny lainga” (2 Tes. 2:11). Toy izao no valin-teny tonga avy hatrany manoloana io andininy io: “Fa nahoana moa Andriamanitra no fahamarinana kanefa mandefa fahadisoan-kevitra? Amin’ny fomba ahoana no iasany tahaka an’i Satana ihany koa?” (ampit. 2 Tes. 2:9 ny 2 Tes. 2:11).
Ao amin’ny andalan-teny dinihintsika ankehitriny i Paoly dia manala ny sarona ka manome fahafahana antsika hanao topy maso amin’ny ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana. Mihoatra lavitra noho ny raharahan’ity tany ity sy ny tantarany anefa no tafiditra ao anatin’izany. Miampanga an’Andriamanitra ho mpanao ny tsy rariny sy mpanao didy jadona ary mpamitaka i Satana. Amin’ny fotoan-tsarotra farany amin’ny tantaran’ny tany no ampanateran’Andriamanitra fiasan’ny fahadisoan-kevitra amin’ny ratsy fanahy, tsy hoe satria mandainga Izy fa satria avelany hisafidy ny lainga, toy izay ny marina, ireo ratsy fanahy, ary noho izany, dia aharihariny ny fiasan’ny fanapahankevitra efa noraisin’izy ireo (2 Tes. 2:12). Ny hany ataony dia ny mamela azy ireo hizaka ny vokatry ny tsy mety ataony. Ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany dia mampiharihary mazava tsara ny fisainana sy ny toetran’i Satana mbamin’ny mpanaradia azy mba ho hitan’ny rehetra.
Manomboka ny fiasan’ny fahadisoan-kevitra rehefa mandà ny filazantsaran’i Jesôsy Kristy ny olona. Ao amin’ny and. 10 ny ratsy fanahy dia mandà, tsy mety mandray ny fitiavana ny fahamarinana. Ny fanolorana ny famonjena ao amin’ny filazantsara no ao ambadik’ireo fahefana amin’ny andro farany voalaza ao amin’ny 2 Tes. 2. Efa nohozongozonin’ny fahefana papaly ny filazantsara tamin’ny alalan’ny fampianarany sy ny fombafombam-pivavahany. Mitohy hatrany izany asa izany mandrapisehony miharihary amin’ny fotoanan’ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany, araka ny fitantarana izany ao amin’ny 2 Tes. 2:8-12. Ny fitoriana farany ny filazantsara (Mat.24:14; Apôk. 14:6, 7), araka izany, dia manomana ho amin’ny fitsarana farany sy ho amin’ireo fahadisoan-kevitra amin’ny andro farany.
Amin’ny farany, na inona na inona fisehon’ny fifanandrinan’ny ratsy sy ny tsara eo amin’ny sehatra pôlitika sy fivavahana ety an-tany, ny filazantsaran’i Jesôsy Kristy, fa tsy ireo fisehoan-javatra ara-pôlitika, no marika lehibe nampisaraka ny tsara sy ny ratsy teo amin’ny tantaran’ny fivavahana kristianina. Ny antikristy dia maneho ny tena toetrany marina amin’ny fisandohany ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fanjakan’i Kristy any an-danitra. Anjara asa fanampiny ihany ny an’ireo mpandray anjara hafa ao amin’ny tantara.
Vakio amim-pitandremana tsara ny 2 Tes. 2:12. Inona no tena antony lehibe tsy andraisan’ny olona ny fahamarinana? Tamin’ny fomba ahoana no efa nanandramanao koa izany foto-kevitra izany teo amin’ny fiainanao? Izany hoe, tamin’ny fomba nisoko mangina ahoana no nanakanan’ny “fankasitrahana” ny tsy fahamarinana ny sainao tsy hisokatra amin’ny fahamarinana?